Faritra Menabe : haverina hosokafana ny Sucoma any Morondava | NewsMada
Faritra Menabe : haverina hosokafana ny Sucoma any Morondava
Haverina hosokafana ny orinasa mpamokatra siramamy Sucoma any Morondava (Sucrerie de Complant de Madagascar), notantanan’ny orinasa sinoa Complant. Tsiahivina fa potika noho ny fandrobana nataon’ny sasany ity orinasa miantoka fiveloman’ny mponina maro any an-toerana ity, ny taona 2014.
Nandritra ny fitsidihan’ny filoha Rajaonarimampianina tany Chine farany teo, niara-dia taminy ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Chabani Nourdine, nisy ny fihaonan’ny minisitra tamin’ireo mpitantana ny Complant. Taorian’izay, nanome toky ny Complant fa vonona izy ireo ny hanokatra indray ny Sucoma any Morondava. Maro rahateo ny mponina any Menabe maniry ny hiverenan’izany.
« Zava-doza ny fandrobana orinasa toy ireny, izay foto-piveloman’ny maro, ka naman’ny mandrora mitsilany ihany ny fanaovana asa habibiana toy ireny », hoy ny minisitra Chabani Nourdine. Mora tokoa ny mandrava fa tsy araka izany ny asa fanarenana ity orinasa ity, izay mitaky hatrany amin’ny 50 tapitrisa dolara. Niaraha-nidinika tany Chine ny fomba fanarenana io orinasa any Morondava io. Tsy maintsy mandeha aloha ny voly fary mandritra ny roa na telo taona, izay vao afaka manodina siramamy. Efa nijery ny lafiny teknika ho amin’ny fampidiran-drano ny teknisianina. Tsy atao ambanin-javatra ny fiambenana ny faritra tsy hiverenan’ny halatra sy fandrobana intsony.
Ho avy rahampitso ny Maraokanina
Nampahafantatra koa ny minisitra, omaly, fa ho avy eto, rahampitso, ny mpandraharaha avy any Maraoka, miisa 80, vokatry ny fandalovany tany an-toerana. Samy manana ny sehatra mahakasika azy ireo mpandraharaha maraokanina ireo, anisan’izany ny fotodrafitrasa, fifandraisan-davitra, famokarana angovo. Anjaran’ny mpandraharaha malagasy ny mijery izay mety ho fiaraha-miasa amin’ireo vahiny ireo.